शौचालयः तराई–मधेशको नयाँ समस्या
सासू डायनापछि बुहारी मेगनलाई पछ्याइरहेछन् ‘पापाराजी’: यसकारण चिन्तित छन् ह्यारी ?
पहिलो प्रादेशिक ‘मानवीय सहायता स्थल’ को धनगढीमा उद्घाटन
दक्ष हुने, विदेश उड्ने
अस्ट्रेलियामा फेरि दन्कियो आगो, राजधानी सहितका कयौं स्थान खाली गराइयो
एमसीसीसँगै नेपालमा अमेरिकी सेना आउँछः नेकपा नेता पोखरेल
किसानको रकम भुक्तानी नगर्ने उखु मिलको आर्थिक कारोबार रोक्का हुने
माघमा शुरु नहुने कार्यक्रमको रकम फिर्ता गर्न सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाको निर्देशन
टिप्पणी मंगलबार, माघ १६, २०७४
जोसँग एउटा छाप्रोले ओगटेको जमीन छ, तिनीहरूलाई त्यहीभित्र चर्पी बनाऊ भन्दा थपिने मानसिक तनाव र स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याको ख्याल गरेको देखिएन ।
सर्लाही जिल्ला सदरमुकाम मलंगवालाई पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोड्ने सडकमै छ, हरिपुर नगरपालिका–४ को हरैया । यो दलित बस्तीमा नयाँ संकट बनेर आएको छ– खुला दिसामुक्त अभियान ।
बस्तीकी सुखली माझीलाई खाना पकाउने र छोराबुहारीलगायत परिवारका सबै सदस्य सुत्ने घरमा चर्पी समेत अटाउनु निकै सकसपूर्ण लागिरहेको छ । उनकी छिमेकी तेजिया माझी पनि त्यही छट्पटीमा छिन् ।
हरैयावासीले खुला ठाउँमा दिसापिसाब गर्नुहुँदैन भन्ने कुरा नबुझेका होइनन् । त्यसमा दुई वटा पक्षले काम गरेको छ– एउटा, समय–सम्पर्क अनुसारको स्वाभाविक चेतना र खुला ठाउँमा शौच गर्न जाँदा सर्पले टोक्ने, साँढेले हान्ने, यौन हिंसा हुने, हिलाम्य ठाउँमा बस्नुको पीडा ।
त्यसमाथि, लोकलाजको कुरा त छँदैछ । त्यो समस्या हटाउने भन्दै उनीहरूलाई घरभित्रै चर्पी बनाउन लगाउँदा नयाँ समस्या थपिएको छ । यो दलित बस्तीमा सबैका घर एक वा दुई कोठाका छन् ।
भएभरका परिवारले गुजारा गर्नुपर्ने त्यही घरमा अब चर्पी भित्रिएको छ । मधेशका सबै जिल्लाका दलित टोल–बस्तीहरूमा यस्तै पीडा सुन्न/देख्न पाइन्छ । यसले सरकारी र गैरसरकारी अभियानको यान्त्रिक सोचको भण्डाफोर गरेको छ ।
अहिलेको समयमा खुला ठाउँमा शौच गर्न कोही चाहँदैन । जोसँग एउटा छाप्रोले ओगटेको जमीन छ, तिनीहरूलाई त्यहीभित्र चर्पी बनाऊ भन्दा थपिने मानसिक तनाव र स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याको ख्याल गरेको देखिएन ।
सरकार होस् या गैरसरकारी संघ–संस्था, शौचालय सबैको प्राथमिकतामा छ । त्यही मेसोमा आएको शौचालय अभियानले जताततैका साइनबोर्डदेखि एफ.एम रेडियोहरूका विज्ञापनहरूसम्म पिटेको छ ।
खुला दिसामुक्त अभियानका नाममा भएका यस्ता प्रचारवाजीले भुईं सतहका भूमिहीनहरूप्रति न्याय होइन, अन्याय नै गरेको छ । ‘खुला दिसामुक्त अभियान’ भन्दै एकतर्फी रूपमा चर्पी बनाउन लगाइँदा दलित बस्तीहरू मानसिक तनावमा छन् र हरैया त्यसको एक उदाहरण हो । चर्पी नबनाए स्थानीय सरकारको सुविधाबाट वञ्चित गर्ने भनिएको छ ।
डर कति देखाइएको छ भने कतिपय दलित बस्तीमा एकै ठाउँमा गुजुमुज्ज शौचालय बनाइएको छ । ती चर्पीहरू स्वस्थ चेतनाको नभएर करकाप वा अपहेलनाको प्रतीक बनेका छन् । सरकारले करकाप त गरेको छ, तर आफ्नोतर्फको बन्दोबस्ती गरिदिएको छैन ।
अब स्थानीय सरकारहरूले यस्तो करकापको शैली सच्याउनुपर्छ । यसको लागि केही मौलिक सवालहरूमा सोचविचार गर्नुपर्छ । अहिले पानीको आपूर्ति पहिले भन्दा कम हुँदै गएको छ । गाउँमा चर्पीको जुन मोडल सिफारिश गरिएको छ, त्यसमा बढी पानी चाहिन्छ । सरकारी अभियानको ध्यान खुला दिसापिसाब मुक्त क्षेत्र विस्तार गर्नुमा मात्र छ, चर्पीबाट हुने जलप्रदूषणमा छैन । चर्पीको सरसफाइमा कमी हुँदा फैलने संक्रमणलाई नजरअन्दाज गरिएको छ ।
पहिले तराईका शहर बजारमा हुनेखानेका घर र चर्पी अलग–अलग हुन्थे । एकै छानामुनि भान्सा, सुत्ने कोठा र चर्पी भएको आधुनिक घर बनाउने चलन आएको धेरै भएको छैन । यसलाई आम चलन बनाउन आर्थिक चाँजोपाँजो मिल्नुपर्छ । त्यो मिले एउटा व्यवस्थित चर्पी बनाउन नचाहने कोही दलित भेटिने छैनन् । खुला दिसामुक्त क्षेत्र अभियानलाई सार्थक पार्न अहिले जारी ‘अपमानजनक’ शैली बदल्नुपर्छ ।
बाली बिरुवाका लागि पिसाबमा धेरै पोषण भएको शोधहरूले देखाएका मात्र छैनन्, अन्यत्रका किसानहरूले पिसाबको नाइट्रोजन, फस्फोरस, पोटासियमबाट धेरै फाइदा लिइरहेका पनि छन् । त्यसैगरी शौचालयको मललाई राम्रो खादको रूपमा प्रयोग गर्न सकिनेतर्फ पनि स्थानीय सरकारले ध्यान दिन सक्छ ।
आज पनि गाउँघरमा कति किसान भेटिन्छन्, जो आफ्नो खेतमा ‘मैदान’ जान गाउँलेहरूलाई सुर्ती, बिंडी दिएर लोभ्याउँछन् । मानव मलमूत्रबाट हुने कृषि लाभलाई शौचालयले छेकबार लगाएको तिनले बुझेका छन् । स्थानीय सरकारहरूले अब शौचालयको त्यस्तो मोडल खोज्नु पर्‍यो, जसबाट मानव मलमूत्रको वैज्ञानिक व्यवस्थापनसँगै आर्थिक लाभ पनि होस् ।
त्यस्तै, शौचालयको सकसमा परेकाहरूलाई कसरी सुबिस्ता दिन सकिन्छ ? त्यो पनि सोच्नु पर्‍यो । त्यसका लागि दलित र विपन्न बस्तीहरूमा सामुदायिक शौचालय कार्यक्रम लागू गर्न सकिन्छ ।
बुधबार, माघ ८, २०७६ सासू डायनापछि बुहारी मेगनलाई पछ्याइरहेछन् ‘पापाराजी’: यसकारण चिन्तित छन् ह्यारी ?
बुधबार, माघ ८, २०७६ पहिलो प्रादेशिक ‘मानवीय सहायता स्थल’ को धनगढीमा उद्घाटन
बुधबार, माघ ८, २०७६ दक्ष हुने, विदेश उड्ने
बुधबार, माघ ८, २०७६ अस्ट्रेलियामा फेरि दन्कियो आगो, राजधानी सहितका कयौं स्थान खाली गराइयो